Mahazo vahana ho azy ny ratsy | NewsMada
Mahazo vahana ho azy ny ratsy
Ny fandio iray siny, hono, tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka. Mibahan-toerana sy mahazo vahana ho azy mandrakariva ny ratsy, na maro anisa toy inona aza ny tsara. Velon-taraina izao ny maro noho ny afitsoky ny mpitondra.
Ireo vitsy anisa eo amin’ny fitondrana na ny manodidina ny mpitondra no tsinay homana aty, manamaimbo ny fitondrana? Mahabe resaka ny amin’ny fisian’ny kolikoly avo lenta, ny kiantranoantrano efa ho lava… odian-tsy hita.
Tsy vitan’izany, saika izay raharaha vitsy na heverina ho tsy inona fa fandoto iray tandroka koa no manaratsy endrika ny fitondrana? Nefa toa ny ratsy no be vita noho ny tsara, raha ny fitarainana sy ny karazana hetsika etsy sy eroa.
Eo ny ady tany, ny fitrandrahan’ny vahiny ny harena an-kibon’ny tany gaboraraka, ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena, ny fivarotana tanindrazana, ny fanamparam-pahefana, ny tsy fandriampahalemana…
Mbola karazan’izay fandoto iray tandroka izay koa, ohatra, ireo andininy vitsivitsy amin’ny lalàn’ny fifandraisana tena fositra mamono fahafahana, na hoe avy amin’ny fakan-kevitra niombonana tany am-piandohana aza ny maro aminy.
Santionan’izay tombanana ho fandoto iray tandroka manimba ny raharaha amin’izao ireo. Loza iray, loza roa: ny fandio iray siny aza tsy mahaleo ny fandoto iray tandroka, vao mainka raha ny fandoto no iray siny…
Rehefa tena dinihina, raha ny asa vita sy ny fomba fiasa ary ny olona miasa: toa ny fandoto izao no iray siny fa tsy ny fandio? Misy antony ao matoa mampiaka-peo ny maro… Iza na inona no tena fositra eto amin’ny firenena amin’izao?